Maxaa ka jira inuu billowday wada-hadallo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka? - Banaadisom
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira inuu billowday wada-hadallo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka?
Muqdisho (Banaadirsom) – Waxaa weli ka taagan magaalada Muqdisho xiisadii dagaal ee u dhaxeysay ciidamada kala taabacsan dowladda waqtigeedu dhamaaday iyo musharaxiinta mucaaridka, taasi oo bilaabatay shalay gelinkii dambe, kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen aaga uu degan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Hase yeeshee, sida ay ogaatay Banaadirsom, illaa hadda majiro wax wada-hadal toos ah oo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka ama waan-waan ah oo loogu tagay saraakiisha hogaamineysa ciidanka ka horyimid muddo kororsiga iyo qaar kamid ah midowga musharaxiinta oo weerar lagu qaaday hoyga ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho.
Xubno ka tirsan Midowga musharixiinta ayaa Banaadirsom u xaqiijiyey inuusan jirin xiriir dhexmaray mas’uuliyiinta dowladda waqtigooda dhamaaday iyo dhinacyada kala ee ku dagaalamay Muqdisho, taasi oo meesha ka saareysa sheegashadii Rooble.